I-champagne eqolo. Ngubani ukuwina emncintiswaneni ka amanani aphezulu?
Ukuze umuntu ovamile, bathi, ngokwesilinganiso, champagne - uphawu holidi. Unyaka omusha, umshado noma iminyaka engu-akuvamile ukwenza ngaphandle lokhu segolide, isiphuzo elikhazimulayo. I Ongoti yangempela futhi gourmets cabanga iwayini elikhazimulayo omunye izimfanelo eziyinhloko okunethezeka ephilayo. Ucabanga ukuthi kungenzeka izindleko champagne ezibizayo kakhulu emhlabeni? Ake sizame ukuthola ngqo Izibalo, kodwa lokhu, masikhumbule amaqiniso athile.
Lokhu ehlobo e Aland owawuse endalini engavamile. Lots kwaqala nebhodlela champagne ezitholakala khona oLwandle iBaltic phakathi kwezimvithi eminyakeni embalwa edlule isitsha lushone. "Catch" zabo ezitholwe abatshuzi Swedish wayenothile ngempela: amabhodlela amane ubhiya eziyikhulu namashumi amane nanhlanu Juglar champagne brand. Ongakulungele ukudliwa babe 79 amabhodlela. Brand La Veuve Clicquot Ponsardin Heidseick, kangcono eyaziwa ngokuthi "Champagne Charlie", lashabalala ekuqaleni kwekhulu nesishiyagalolunye. Izindleko ebhodleleni ngalinye abagqugquzeli balinganiselwa ku dollar ayinkulungwane 100. Ubude nanye asele yalezi amabhodlela, futhi lonke ababethengiswe Auction ngonyaka odlule.
Nokho, lesi akusona champagne ezibizayo kakhulu emlandweni zokuhweba. Bottle of Piper Heidsieck ukukhiqizwa ngo-1907 lathengiswa abangu-275,000 bakhetha zamadola.
brand French Louis Vyutton ozinikezele Russian is kangcono eyaziwa ukwenziwa lesikhumba izesekeli. Nokho, kwacaca ukuthi, sha Louis Vuitton akugcini lokhu. Ngo-2008 ngesikhathi endalini e-Hong Kong kwathengiswa champagne, ukhululeka ngaphansi lokhu brand. Phuza endaweni vintage umsebenzi ibhodlela design abiza umthengi e ayizinkulungwane 21 zamaRandi. Unyaka champagne Dedela - 1928 th.
Impela, uma kuziwa iziphuzo, ogama yobudala amabanga kusuka nedlanzana ezimbalwa ukuze ngemva kwamakhulu ambalwa, abaqoqi bazimisele ukukhokha imali, nje ukuthola ibhodlela "elixir ngokuyisimangaliso" ewayinini yabo iqoqo. Kodwa kuvela, champagne ezibizayo akuwona rarity. Khumbula Cristall noma Dom Perignon, ekugcineni Armand de Brignac. Nokho, futhi lokhu akuyona mkhawulo. lwaphuka irekhodi intengo Pernod Ricard, okuyinto eyakhishwa ngo-2009, i-champagne eqolo ukuqoqwa iqoqo a amabhodlela kweshumi. Ngamunye wabo kubiza cishe 4166 euro. Collection Champagne Perrier-Jouet ukhiphe edition elinganiselwe. Thengisa elikhazimulayo kuhlelwe e-US, Japan, eBrithani, eRussia kanye France.
Isiphuzo ka Pernod Ricard wathola isihloko zokuhlonipha ka "champagne kakhulu eqolo" futhi zanda ohlwini imikhiqizo efanayo.
Manje phindela zabuna. Kwaphela isikhathi eside entendeni izindleko imikhiqizo yabo igcinwe Dom Perignon. Ngazo zonke izikhathi, le-champagne kubhekwa nenhle kakhulu futhi ahlukile, njengoba kukhiqizwa kusuka izinhlobo elite amagilebhisi kuvuna ngesikhathi sokuvuna engcono. On New Year endalini champagne eqolo kusukela Dom Perignon kwathengiswa ngentengo ayizinkulungwane 40 zamadola ibhodlela volume of amalitha amathathu.
Champagne Cristal Brut udaba 1990 ku okusha - York endalini Sotheby akasekho, "isando" I-17625 zamadola. Iwayini siye kwaveza France, ebhodleleni i okukhethekile eziyisithupha-litre amabhodlela, amalebula elalihlotshiswe ngegolide leaf. Kufanele kuqashelwe ukuthi izindleko emaphaketheni kakhulu anda intengo isiphuzo. Nokho, Cristal akuyona nomkhiqizi kuphela uncika umklamo. Yini awuzange ehlotshiswe amabhodlela champagne namuhla. Esikhathini course amadayimane, amatshe ayigugu, amamaki ezibizayo crystal.
A qiniso eliyimpicabadala - ngisho nangezikhathi zenhlekelele kwezomnotho ezijulile, abathengi abacebile abangajabuli intshisekelo ezibizayo, iwayini enkulu. Ngokusobala, amanani kakhulu ibhodlela champagne ongakabi okuthiwa kanye umncintiswano baqhubeka phakathi abakhiqizi. Nakuba Bubbles elikhazimulayo ngo ingilazi ubude ahlale iwuphawu lokuthi ukuphila okwenzeka, ukufunwa lesi siphuzo ngeke kuwele. Nokho, singakwazi kuphela ziyamangala lapho nobubanzi umgamu wawo.
Smoothies Ungadliwa: extravaganza zokunambitha
"Novoterskaya amanzi": isakhiwo, izibuyekezo zamakhasimende izinzuzo
Legendary "Krusovice" - ubhiya nge umlando onothileko
Juice "Agusha": ukubuyekeza sokuqanjwa, ukubuyekezwa. juice Wezingane
Japanese iplamu iwayini - umeshu
Al Fatiha - mosque, okuyinto kuwufanele bebona ...
Inkukhu izinhliziyo, iresiphi zobusha bami
Isikebhe esikhwameni: iseluleko ekukhethweni
Izicathulo "amaViking" Winter zezingane - ukhululekile, elula, stylish!
Kuyini PPP, kwakuwukuthi yayo
Izinzuzo Ginger futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Lokho kwakufanekisela umqhele kabili we oFaro baseGibithe? imfanelo yamandla
Ukubonisana nge onguchwepheshe: Yini okumele uyenze uma yenhlwathi bee